Alahady 21/06/2015 : Tenin’ Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Jôba (Jôb 38, 1. 8-11)
Iza no nanidy ny ranomasina tamin’ny varavarana?
Namaly an’i Jôba ny Tompo tao anatin’ny tafio-drivotra ka nanao hoe: “Iza no nanidy ny ranomasina tamin’ny varavarana, fony izy nivoaka nisavoamboana avy any am-bohòka; raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho, ary ny zavona matevina ho lambam-pandriany; raha nampanaiky azy ny didiko sy nanisy hidy amam-baravarana taminy, ka nilaza taminy hoe: Hatreto alehanao, ka tsy hihoatra, fa eto no hijanona ny fianjonanjonan’ny onjanao”.
Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2 Kôr 5, 14-17)
Indro tonga vaovao ny zavatra rehetra.
Ry kristianina havana, terin’ny fitiavan’i Kristy antsika izahay, satria fantatray marina fa maty ho an’ny olona rehetra ny olona iray, ka dia maty koa izy rehetra; ary maty ho an’ny olona rehetra Izy, mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay velona, fa ho an’Izay maty sy mitsangana ho azy ireo. Koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay; ary na dia nahalala an’i Kristy araka ny nofo aza izahay, dia tsy araka izany intsony no ahalalanay Azy ankehitriny. Noho izany, na iza na iza ao amin’i Kristy, dia zava-boaary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 4, 35-40)
Iza moa io, fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky Azy?
Tamin’izany andro izany, dia fanoharana maro no nitorian’i Jesoa teny tamin’ny vahoaka. Ary nony hariva ny andro, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: “Andeha isika hita ho eny an-dafin-drano”. Dia nilaozan’izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin’izao an-tsambo kely i Jesoa, ary nisy sambo kely maromaro koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery nampisavoana ny onjan-drano hatrany anaty sambo kely, ka efa nihafeno rano izy. Fa i Jesoa kosa natory teo am-body sambo kely tambonin’ny ondana, ka nofohazin’izy ireo Izy nilazany hoe: “Ry Mpampianatra ô! tsy mampaninona Anao va raha maty izahay?” Dia nifoha Izy ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin’ny ranomasina hoe: “Mangina, mitonia”. Dia nitsahatra ny rivotra, ary nitony dia nitony ny andro. Ary hoy Izy tamin’izy ireo: “Nahoana no saro-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo?” Ary natahotra dia natahotra izy ireo ka nifampilaza hoe: “Iza moa io, fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky Azy?”